01.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– ठूला-ठूला स्थानमा ठूला-ठूला सेन्टर खोल , सेवालाई बढाउनको लागि योजना बनाऊ , मिटिङ गर , चिन्तन गर।”
स्थूल आश्चर्य त सबैले जानेका छन् तर सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य कुनचाहिँ हो जुन तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ?
सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य हो– सबैका सद्गति दाता बाबा स्वयं आएर पढाउनु हुन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा बताउनको लागि तिमीले आ-आफ्नो पसल (सेन्टर) भव्य बनाउनु पर्छ किनकि मानिसहरू भव्यता देखेर नै आउँछन्। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो र ठूलो पसल राजधानीमा हुनुपर्छ, जहाँ सबैले आएर बुझून्।
शिव भगवानुवाच। रुद्र भगवानुवाच पनि भन्न सकिन्छ किनकि शिव मालाको गायन छैन। जसको मनुष्यहरूले भक्तिमार्गमा धेरै जप्छन् त्यसको नाम राखिएको छ रुद्र माला। कुरा एउटै हो तर सही रूपमा शिवबाबाले नै पढाउनु हुन्छ। त्यही नाम नै हुनुपर्छ, तर रुद्रमालाको नाम चल्दै आउँछ। त्यो पनि सम्झाउनु पर्छ। शिव र रुद्रमा कुनै फरक छैन। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ– हामी राम्ररी पुरुषार्थ गरेर बाबाको मालाको नजिकमा आऔं। यो दृष्टान्त पनि बताइन्छ। जसरी बच्चाहरू दौडेर जान्छन्, निशानासम्म गएर फेरि फर्केर टिचरको पासमा उभिन्छन्। तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ– हामीले ८४ को चक्कर लगायौं। अब पहिला-पहिला गएर मालामा उनिनु छ। त्यो हो विद्यार्थीहरूको दौड, यो हो रूहानी दौड। त्यो दौड तिमीले गर्न सक्दैनौ। यो त हो नै आत्माको कुरा। आत्मा त बुढो, जवान, सानो-ठूलो हुँदैन। आत्मा त उस्तै हुन्छ। आत्माले त आफ्नो पितालाई याद गर्नु छ, यसमा कुनै मेहनतको कुरा छैन। पढाइमा कमजोर हुन सक्छ तर यसमा के मेहनत छ? केही पनि छैन। सबै आत्माहरू भाइ-भाइ हुन्। त्यस दौडमा त युवाहरू छिटो दौडन्छन्। यहाँ त त्यो कुरा छैन। तिमी बच्चाहरूको दौड हो रुद्रमालामा उनिनु। बुद्धिमा छ– हामी आत्माहरूको पनि वृक्ष छ। त्यो हो शिवबाबा र सबै मनुष्य मात्रको माला। यस्तो होइन, केवल १०८ वा १६१०८ को मात्र माला हो। होइन। जति पनि मनुष्य मात्र छन्, सबैको माला हो। बच्चाहरूले सम्झन्छन्– नम्वरवार हरेक आ-आफ्नो धर्ममा गएर विराजमान हुन्छन्, जो फेरि कल्प-कल्प त्यसै ठाउँमा नै आइरहन्छन्। यो पनि आश्चर्य छ नि। दुनियाँले यी कुरालाई जानेका छैनन्। तिमीहरू मध्ये पनि जो विशालबुद्धि छन् तिनीहरूले यी कुरालाई बुझ्न सक्छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा यो ख्याल रहनु पर्छ– हामीले सबैलाई मार्ग कसरी बताऔं। यो हो विष्णुको माला। सुरुदेखि लिएर वंशावली सुरु हुन्छ, हाँगा-बिँगा सबै छन् नि। त्यहाँ (परमधाममा) पनि साना-साना आत्माहरू रहन्छन्। यहाँ छन् मनुष्य। फेरि सबै आत्माहरू एक्युरेट त्यहाँ रहन्छन्। यो आश्चर्यजनक कुरा हो। मानिसहरूले यो स्थूल आश्चर्य सबै देख्छन् तर त्यो त केही पनि होइन। यो कति आश्चर्य छ– सर्वका सद्गति दाता परमपिता परमात्मा आएर पढाउनु हुन्छ। कृष्णलाई सर्वका सद्गति दाता कहाँ भनिन्छ र! तिमीले यी सबै प्वाइन्टहरू पनि धारण गर्नु छ। मूल कुरा हो नै गीताका भगवानको। यसमा विजय प्राप्त भयो भने पुग्यो। गीता हो नै सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, भगवानले उच्चारण गर्नुभएको। पहिला पहिला यो कोसिस गर्नु छ। आजकल त बडो भव्यता हुनुपर्छ, जुन पसलमा धेरै भव्यता हुन्छ त्यहाँ मनुष्य धेरै घुस्छन्। सम्झन्छन्– यहाँ राम्रो माल छ होला। बच्चाहरू डराउँछन्, यति ठूला-ठूला सेन्टर खोल्यौं भने लाख दुई लाख सलामी दिनुपर्छ तब मात्र मन परेको घर मिल्छ। एउटै रोयल पसल होस्, ठूलो पसल ठूलो-ठूलो सहरमा नै हुन्छ। तिम्रो सबैभन्दा ठूलो पसल राजधानीमा हुनुपर्छ। बच्चाहरूले विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ– कसरी सेवा बढाउन सकिन्छ? ठूलो पसल खोल्यो भने ठूला-ठूला मानिस आउँछन्। ठूला मानिसहरूको आवाज चाँडै फैलिन्छ। पहिला पहिला त यो कोसिस गर्नुपर्छ। सेवाको लागि ठूलो भन्दा ठूलो स्थान यस्तो ठाउँमा बनाऊ, जसलाई ठूला-ठूला मनुष्य आएर देखेर आश्चर्य मानून्। फेरि त्यहाँ सम्झाउनेहरू पनि फस्टक्लास चाहिन्छ। कोही एउटा पनि कच्चा बी.के. ले सम्झाए भने सम्झन्छन्– सायद सबै बी.के. यस्तै होलान्। त्यसैले पसलमा सेल्सम्यान पनि राम्रो फस्टक्लास हुनुपर्छ। यो पनि धन्दा हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ– हिम्मत बच्चाहरूको, मदत बापदादाको। त्यो विनाशी धन त कुनै काममा आउँदैन। हामीले त आफ्नो अविनाशी कमाई गर्नु छ, यसमा धेरैको कल्याण हुन्छ। जसरी यी ब्रह्माले पनि गरे। फेरि भोकै कहाँ मर्छन् र! तिमीले पनि खान्छौ, यिनले पनि खान्छन्। यहाँ जुन खान-पान मिल्छ त्यो अन्त कहीं पनि मिल्दैन। यो सबैथोक बच्चाहरूको नै हो। बच्चाहरूले आफ्नो राजाई स्थापना गर्नु छ, यसमा धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ। राजधानीमा नाम फैलियो भने सबैले बुझ्छन्। भन्छन्– अवश्य यिनीहरू त सत्य बताउँछन्। विश्वको मालिक त भगवानले नै बनाउनु हुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई विश्वको मालिक कहाँ बनाउँछन् र! बाबाले सेवाको वृद्धिको लागि राय दिइरहनु हुन्छ।
सेवाको वृद्धि तब हुन्छ जब बच्चाहरूको उदारदिल हुन्छ। जुन काम गर्छौ त्यो उदार दिलले गर। कुनै पनि शुभ कार्य आफैं गर्नु– यो धेरै राम्रो हो। भनिन्छ पनि, स्वयं नै जसले गर्छ ऊ देवता, भनेर जसले गर्छ ऊ मनुष्य, भनेर पनि जसले गर्दैन.... बाबा त दाता हुनुहुन्छ। बाबाले कहाँ भन्नुहुन्छ र यो गर। यस कार्यमा यति लगाऊ। होइन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– ठूला-ठूला राजाहरूको हात त कहिल्यै बन्द रहँदैन। राजाहरू सधैं दाता हुन्छन्। बाबा राय दिनुहुन्छ– के-के गर्नुपर्छ। सावधानी पनि धेरै चाहिन्छ। माया माथि विजय प्राप्त गर्नु छ, धेरै उच्च पद छ। अन्त्यमा रिजल्ट निस्किन्छ फेरि जो धेरै अंक ल्याएर पास हुन्छन् उनलाई खुसी पनि हुन्छ। अन्त्यमा साक्षात्कार त सबैलाई हुन्छ नि, तर त्यस समयमा के गर्न सक्छन् र। तकदिरमा जे छ त्यही मिल्छ। पुरुषार्थको कुरा बेग्लै छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ– विशाल बुद्धि बन। अहिले तिमीहरू धर्म आत्मा बन्छौ। दुनियाँमा धर्मात्मा त धेरै थिए नि। उनीहरूको धेरै प्रसिद्धि छ। फलाना धेरै धर्मात्मा मनुष्य थिए। कोही-कोही त पैसा जम्मा गर्दा-गर्दा अचानक मर्छन्। फेरि ट्रस्टी बन्छन्। कोही बच्चा नालायक भयो भने फेरि ट्रस्टी बनाउँछन्। यस समय त यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ। ठूला-ठूला गुरु आदिलाई दान गर्छन्। जसरी कश्मिरका महाराजा थिए इच्छा पत्र दिएर गए ताकि आर्य समाजीहरूलाई मिलोस्। उनको धर्मको वृद्धि होस्। अब तिमीले के गर्नुपर्छ, कुन धर्मलाई वृद्धि गर्नुपर्छ? आदि सनातन देवी-देवता धर्म नै हो। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। अहिले तिमीले फेरि स्थापना गरिरहेका छौ। ब्रह्माद्वारा स्थापना। अब बच्चाहरू एकको यादमा रहनु पर्छ। तिमीले यादको बलबाट नै सारा सृष्टिलाई पवित्र बनाउँछौ किनकि तिम्रो लागि त पवित्र सृष्टि नै चाहिन्छ। यसलाई आगो लागेपछि पवित्र बन्छ। खराब चीजलाई आगोमा राखेर पवित्र बनाइन्छ। यसमा सबै अपवित्र वस्तु परेर फेरि राम्रो भएर निस्किन्छ। तिमीलाई थाहा छ– यो धेरै छी-छी तमोप्रधान दुनियाँ हो। फेरि सतोप्रधान हुनु छ। यो ज्ञान यज्ञ हो नि। तिमी हौ ब्राह्मण। यो पनि तिमीलाई थाहा छ– शास्त्रमा अनेकौं कुरा लेखिएका छन्, यज्ञमा फेरि दक्ष प्रजापतिको नाम देखाइएको छ। फेरि रुद्र ज्ञान यज्ञ भनियो। यसको लागि पनि के-के कथा लेखिएको छ। यज्ञको वर्णन काइदा अनुसार छैन। बाबाले नै आएर सबै कुरा सम्झाउनु हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले ज्ञानयज्ञ रचेका छौ, श्रीमत अनुसार। यो हो ज्ञानयज्ञ अनि फेरि विद्यालय पनि हो। ज्ञान र यज्ञ दुवै अक्षर बेग्ला-बेग्लै छन्। यज्ञमा आहूति गरिन्छ। ज्ञानसागर बाबा नै आएर यज्ञ रच्नुहुन्छ। यो धेरै ठूलो यज्ञ हो जसमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनु छ।
त्यसैले बच्चाहरूले सेवाको योजना बनाउनु पर्छ। गाउँ आदिमा पनि सेवा गर। तिमीलाई धेरैले भन्छन् गरिबहरूलाई यो ज्ञान दिनुपर्छ। केवल राय दिन्छन्, स्वयंले कुनै काम गर्दैनन्। सेवा गर्दैनन् केवल राय दिन्छन् यस्तो गर, यो धेरै राम्रो छ। तर हामीलाई फुर्सद छैन। ज्ञान धेरै राम्रो छ। सबैलाई यो ज्ञान मिल्नुपर्छ। आफूलाई ठूलो मानिस, तिमीलाई सानो सम्झन्छन्। तिमी धेरै सावधान रहनु छ। त्यस पढाइको साथै फेरि यो पढाइ पनि मिल्छ। पढाइबाट कुराकानी गर्ने अक्कल आउँछ। चाल-चलन राम्रो हुन्छ। अनपढ त बुद्धू हुन्छन्। कसरी कुरा गर्नुपर्छ समझ हुँदैन। ठूला मानिसलाई सदैव “तपार्इं” भनेर कुरा गर्नुपर्छ। यहाँ त कोही-कोही यस्ता पनि छन् जसले पतिलाई पनि तँ, तँ भन्छन्। तपाईं अक्षर रोयल हो। ठूला मानिसलाई तपाईं भनिन्छ। बाबाले पहिला पहिला राय दिनुहुन्छ– दिल्ली जुन परिस्तान थियो, फेरि यसलाई परिस्तान बनाउनु छ। त्यसैले दिल्लीमा सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ, विज्ञापन धेरै राम्रो गर्नुपर्छ। टपिकहरू पनि बताइरहनु हुन्छ। टपिकको लिष्ट बनाऊ फेरि लेख्दै जाऊ। विश्वमा शान्ति कसरी हुन सक्छ आएर बुझ्नुहोस्, २१ जन्मको लागि निरोगी कसरी बन्न सकिन्छ आएर बुझ्नुहोस्। यस्तो खुसीको कुरा लेखिएको होस्। आएर २१ जन्मको लागि निरोगी सत्ययुगी डबल शिरताज बनौं। सत्ययुगी अक्षर त सबैमा राख, सुन्दर-सुन्दर अक्षर भयो भने मनुष्य देखेर खुसी हुन्छन्। घरमा पनि यस्ता बोर्ड चित्र आदि लागेको होस्। ठीक छ, आफ्नो कारोबार आदि गर। साथ-साथै सेवा पनि गरिराख। कारोबारमा सारा दिन कहाँ रहनु पर्छ र! माथिबाट केवल रेखदेख गर्नुपर्छ। बाँकी काम आसिस्टेन्ट म्यानेजर चलाउँछन्। कोही सेठ उदारदिल छ भने असिस्टेन्टलाई राम्रो तलव दिएर पनि गद्दीमा बसाउँछन्। यो त बेहदको सेवा हो। अरू सबै हो हदको सेवा। यस बेहद सेवामा कति विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। हामीले विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्छौं। कालमाथि पनि हामीले विजय प्राप्त गरेर अमर बन्छौं। यस्तो-यस्तो शब्द देखेर आउँछन् र बुझ्ने कोसिस गर्नेछन्। अमरलोकमा मालिक कसरी बन्न सकिन्छ आएर बुझ्नुहोस्, धेरै टपिकहरू निस्किन सक्छन्। तिमीले कसैलाई पनि विश्वको मालिक बनाउन सक्छौ। त्यहाँ दु:खको नाम-निशान पनि रहँदैन। बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई फेरि के बनाउन आउनु भएको छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– पुरानो सृष्टिबाट नयाँ सृष्टि बन्छ। मृत्यु पनि सामुन्ने खडा छ। देखिरहेका छौ लडाईं लागिरहन्छ। ठूलो लडाईं लाग्यो भने त खेल नै खतम हुन्छ। तिमीले त राम्ररी जानेका छौ। बाबा धेरै प्यारले भन्नुहुन्छ– मीठे बच्चे, विश्वको बादशाही तिम्रो लागि हो। तिमी विश्वको मालिक थियौ, विश्वमा तिमीले अथाह सुख देख्यौ। त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। त्यसैले यति खुसी हुनुपर्छ। बच्चाहरूले आपसमा मिलेर राय निकाल्नुपर्छ। पत्र-पत्रिकामा छपाउनु पर्छ। दिल्लीमा पनि हवाइजहाजबाट पर्चा खसाऊ। निमन्त्रण दिन्छन्, खर्च त्यति धेरै कहाँ लाग्छ र, ठूला आफिसरले बुझे भने त नि:शुल्क पनि गर्न सक्छन्। बाबा राय दिनुहुन्छ– जसरी कलकत्ता छ त्यहाँ चौरंगीमा फस्टक्लास एउटै ठूलो रोयल पसल होस्, तब ग्राहक धेरै आउँछन्। मद्रास, मुम्बई ठूला-ठूला सहरमा ठूला पसल होस्। बाबा व्यापारी पनि त हुनुहुन्छ नि। तिमीबाट पाई-पैसा लिएर त्यसको बदलामा के दिन्छु? त्यसैले गायन छ रहमदिल। कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउनेवाला, मनुष्यलाई देवता बनाउनेवाला। महिमा एक बाबाको हो। बाबा नभएको भए त तिम्रो के महिमा हुन्थ्यो।
तिमी बच्चाहरूलाई नशा हुनुपर्छ– भगवानले हामीलाई पढाउनु हुन्छ। नरबाट नारायण बन्ने लक्ष्य-उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। पहिला पहिला जसले अव्यभिचारी भक्ति सुरु गरेका थिए, उनीहरूले नै आएर उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गर्छन्। बाबा कति राम्रा-राम्रा प्वाइन्ट सम्झाउनु हुन्छ। बच्चाहरूले भुल्छन् तब बाबा भन्नुहुन्छ– प्वाइन्ट लेख। टपिकहरू लेख्दै जाऊ। डाक्टरहरूले पनि किताब पढ्छन्। तिमी हौ मास्टर रूहानी सर्जन। तिमीलाई सिकाइन्छ आत्मालाई इन्जेक्शन कसरी लगाउनु पर्छ। यो हो ज्ञानको इन्जेक्शन। यसमा सुइ आदि त केही छैन। बाबा हुनुहुन्छ अविनाशी सर्जन, आत्माहरूलाई आएर पढाउनु हुन्छ। त्यही आत्मा अपवित्र बनेको छ। यो त धेरै सहज छ। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ, उहाँलाई हामीले याद गर्न सक्दैनौ! मायाको विघ्न धेरै पर्छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– चार्ट राख र सेवाको ख्याल गर तब धेरै खुसी हुन्छ। जतिसुकै राम्ररी मुरली चलाए पनि योग छैन। बाबासँग सच्चा बन्न पनि धेरै मुश्किल छ। यदि हामी धेरै तीक्ष्ण छौं भन्ने सम्झन्छन् भने त बाबालाई याद गरेर चार्ट पठाऊन् अनि बाबा सम्झिनुहुन्छ– कहाँसम्म सत्य छन् वा झुटा छन्? अच्छा, बच्चाहरूलाई सम्झाएँ– सेल्सम्यान बन्नु छ, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको। अच्छा!
१) लक्ष्य-उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर नशामा रहनु पर्छ, मास्टर रूहानी सर्जन बनेर सबैलाई ज्ञान इन्जेक्सन लगाउनु छ। सेवाको साथ-साथै यादको पनि चार्ट राख्नु पर्छ तब खुसी हुन्छ।
२) कुराकानी गर्ने चाल-चलन राम्रो राख्नुपर्छ, ‘तपाई’ भनेर कुरा गर्नुपर्छ। हर कार्य उदारदिल बनेर गर्नु छ।
स्व-कल्याणको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा विश्व कल्याणको सेवामा सदा सफलतामूर्त भव
जसरी आजकल हर्टफेलको शारीरिक रोग बढी छ आध्यात्मिक उन्नतिमा निराश हुने रोग बढी छ। यस्ता निराश आत्माहरूमा प्राक्टिकलमा परिवर्तन देखेपछि नै हिम्मत वा शक्ति आउन सक्छ। सुनेका धेरै छन्, तर अब देख्न चाहन्छन्। प्रमाणद्वारा परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसैले विश्व कल्याणको लागि स्व-कल्याण पहिला आदर्शको रूपमा देखाऊ। विश्व कल्याणको सेवामा सफलतामूर्त बन्ने साधन नै हो प्रत्यक्ष प्रमाण, यसबाट नै बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। जे बोल्छौ त्यो तिम्रो स्वरूपबाट प्रत्यक्ष देखियोस् तब मान्नेछन्।
अरूको विचारलाई आफ्नो विचारसँग मिलाउनु– यही नै रिगार्ड दिनु हो।